कृषि विकास बैंकले राखेपका कर्मचारीलाई रु. १५ लाखसम्म तलबी खाता कर्जा दिने| Corporate Nepal
कृषि विकास बैंकले राखेपका कर्मचारीलाई रु. १५ लाखसम्म तलबी खाता कर्जा दिने
पुस १५, २०७७ बुधबार ११:४०
काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) र कृषि विकास बैंकबीच १० वर्षे सम्झौता भएको छ । राखेपका सदस्य-सचिव रमेशकुमार सिलवाल र कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले आज उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार कर्मचारी कर्जा तथा सापटसम्बन्धी पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई बिना धितो रु १५ लाखसम्मको तलबी खाता कर्जा उपलब्ध गराइने छ । राखेपले सञ्चालन गर्ने तालीम र सेमिनारमा बैंकका तालीम केन्द्रलगायत पूर्वाधार प्रयोग गर्दा बैंकले ५० प्रतिशत छुट दिनेछ ।
सम्झौता पत्र आदनप्रदान गर्दै सदस्य सचिव सिलवालले सहकार्यले दुवै संस्थालाई एक ठाँउमा ल्याएको र यसको लाभ स्वभाविक रुपमा दुवैलाई मिल्ने बताए । उनले बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्टयाएकोे बजेटको २५ प्रतिशत रकम मात्र खेलकूदमा लगानी गर्नसके महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले नेपालको खेलकूद क्षेत्रसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिन पाउँदा संस्था गौरवान्वित भएको बताए । उनले विगतलाई स्मरण गर्दै भलिबलका १० राष्ट्रिय खेलाडीलाई संस्थामा आबद्ध गरेर खेलकूदमा संलग्न भई काम गरेको र पुनः खेलकुदसँग जोडिँदा नतिजा फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश र जिल्लामा समेत संस्थाको माध्यमबाट स्थानीय तहसम्म सहकार्य गर्न सकिने उपाध्यायको भनाइ थियो ।